Chengetedza $ 1000 paSmooth 5.65 Treadmill Chengetesa $ 999 - Kubudirira Kwemagariro
musha » Treadmills » Smooth » Chengetedza $ 1000 paSmooth 5.65 Treadmill Chengeta $ 999 chete
Chengetedza $ 1000 paSmooth 5.65 Treadmill Chengeta $ 999 chete
Kurasikirwa Kwemagariro Kunounza Kwauri 2013 Treadmill Kutengwa kubva kuSmooth Fitness
Chengeta $ 1000 paSmooth 5.65 Treadmill
Mutengo unowanikwa mutengo ndeye $ 1999 ... nekutengeswa uku iwe unobhadhara $ 999 chete !!!
Kana mari yakaderera, kune mwedzi wekubhadhara sarudzo ye $ 39 / mwedzi
Pamusoro peSmooth 5.65 Treadmill:
Iyo Smooth 5.65 inodhura, inogadzirisa zvigadzirwa zvemapuraneti zvine chinyorwa chakanaka che 2 chinyoro chekudonhorera pasi kuti ikubatsire kuchengetedza nzvimbo uye nyore nyore kuchengeta. NeSmooth 5.65 gasi rinoputika gasi-kubatsira kusimudza iwe unogona kuvhara zvinyoronyoro chigadziko chechigadziro muchigaro uye chichiendesa kure kuti chichengetedzwe.
Iyo Smooth 5.65 ine SmoothSound ™ inzwi rwenheyo. Iwe unogona kuisa mutambi wako wePod / MP3 kune jack rekubatsira uye unoteerera mimhanzi yako yaunofarira kuburikidza nevatauri vezvinyorwa
Pane 3 window window LED neLCD Dot Matrix. Ichi chiratidzo chinoratidza nguva, kureba, kukurumidza, kutenderera, kushaya mwoyo, & calories
The Smooth 5.65 ine 2.75 inoenderera mberi motokari yemagetsi iyo inovaka upenyu hurefu. Ive nePulse Width Modulation (PWM) yebhodhi redhibhodhi iyo inowanzowanika pane zvigadzirwa zvebhizimisi. Iko motokari ye5.65 inoshanda pasina ruzha
Izvi zvinokonzera mapurogiramu akasiyana-siyana eE14:
- 1 manual program
- 12 speed / incline mapurogiramu
- 1 body fat program.
Izvi zvinotapira zvinokonzera mabhodhoro e-2 emvura uye inoverengeka yekuverenga rack iyo yakanaka kune bhuku kana kunyange iPad yako kana Kindle device. Iko kune chivakwa mune fan zvakare izvo zvichakubatsira kupora iwe pasi munguva yekushanda kwako.
Iyo Smooth 5.65 ine dhidhiyo yakajeka yekururamisa - Iwe waranti yeupenyu nguva dzose pamusana, makore 5 kune zvikamu, uye makore 2 pahutano.
Purha yeThe Smooth 5.65 Folding Treadmill Nhasi kubva kuSmooth Fitness !!
Zvimwe Zvimwe Smooth Fitness Treadmills Zvimwe Zvine Zvokutengesa kuAmazambique ne FREE Shipping:
* Price of $ 999 yeSmooth 5.65 Treadmill inonzi yakakodzera seyomu 10 / 17 / 13 1: 15 AM Nhamba yakarurama seyenguva / zuva inoratidzwa uye inogona kuchinja
October 17, 2013 FitnessRebates Smooth, Smooth Fitness, Treadmills No Comment	smooth 565, smooth fitness 5.65 treadmill, smooth fitness 565, smooth fitness 565 treadmill, smoothfitness 5.65 treadmill
Tenga 1 6lb Celltech & Tsvaga 45ct Neurocore FREE Yakakodzera 10 / 31 / 13